Nagu saabsan - Liaocheng Xinrun Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Co., Ltd.
Baabuur Scissor Jack
Dhalo Haydarooliga Jack
Dahaarka Bareega Baabuurka
Waxaa la aasaasay 1998, Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. Waxay ku taal aagga horumarinta dhaqaalaha ee Liaocheng, Gobolka Shandong, waxay ku fadhidaa aag dhan 68956 mitir murabac iyo goob dhisme oo dhan 39860 mitir murabac ah. Waxaa jira 327 shaqaale, oo ay ku jiraan in ka badan 52 shaqaale xirfad iyo farsamo leh. Wadarta hantida waa 83 milyan oo yuan dakhliga soo gala iibkuna waa 200 milyan oo doolar.
Our dhululubo Haydarooliga waxaa inta badan loo isticmaalaa loader, loader isteerinka, madal wiishka, gaari qashinka, gaari xamuul ah, trailer, goostay, iyo mashiinno badan oo dhismaha. Ka dhigi kara sida shuruudahaaga iyo sawiradaada Aqbal OEM iyo ODM.
Shirkadeena waa soo saare xirfadlayaal ah isla markaana dhoofisa kana walaacsan naqshadeynta, horumarinta iyo soo saarida telescopic iyo dhululubo Haydarooliga ah. Xarumaheena si fiican u qalabeysan iyo tayada tayada wanaagsan dhammaan heerarka wax soo saarku waxay noo suuragelineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamiisha.
Wax soo saarkayagu wuxuu ka socdaa beeraha ilaa baabuurta iyo warshad kasta, wax soo saarka waxaa loogu talagalay inuu la kulmo macaamiisha dalabkooda. OEM iyo ODM waa la aqbalay. Khadka wax soo saarka ayaa la soo saaray maxaa yeelay waxaan fahamsanahay baahida loo qabo waxqabadka xirfadeed iyo adkeysiga.
waxaan nahay alaab-qeybiyeyaasha ugu muhiimsan ee soosaarida gawaarida guryaha ee ganacsiga sida Shiinaha Zhongqi, Shanxi Zhongqi, FAW, Hongta, Chongqing Changan, iwm. Waxyaabaheena waxaa loo dhoofiyaa USA, Russia, Poland, Vietnam, Italy, Ukraine, Romania, Australia, Canada, South Korea, Malaysia iyo wadamada kale iyo gobolada. oo si ballaaran ayaa loo aqbalaa tayada sare.iyo isku halaynta. Shirkaddu waxay aasaastay nidaam adeeg adeeg dhammaystiran leh, iyadoo ku qanacsan iyo waqti hore iibinta, iibinta iyo adeegga iibka kadib Shandong Wei Run Warshadaha Warshadaha Co., Ltd. waxay si daacadnimo leh u rajeyneysaa inay gacmaha isqabsadaan, isla markaana ku horumariyaan faa iidada iyo horumarka guud!
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabtayada ama aad rabto inaad ka wada hadasho amar qaas ah, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir. Waxaan rajeyneynaa inaan sameysano xiriir ganacsi oo guuleysta macaamiisha cusub ee adduunka mustaqbalka dhow.
NO.30 Huanghe Wadada, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha Liaocheng, Shandong, Shiinaha